Riviera Nayarit, La colorada B&B /III - I-Airbnb
Zacualpan, Nayarit, i-Mexico
Ikamelo e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Rosalba
Ukukhansela kwamahhala ngaphambi komhla ka-Jul 14.
I-La colorada iyindawo ekumema ukuthi uphumule futhi ube nokuthula. Uma ukhathazekile yinkambiso futhi ukucindezeleka kuza e-La colorada. Jabulela ukuzola kude nesiphithiphithi nomsindo wedolobha endaweni yasemaphandleni. Idolobhana lase-Zacualpan lingamakhilomitha angu-10. ukusuka ebhishi. Abantu bayo banobungane futhi kulula.
Ukuhlala kwakho e-La colorada kuzohlala kumnandi ngokunethezeka nobuhle bezindawo zayo nokunaka okuhle komnikazi wayo.
Sinekati elilodwa kuphela, aligqugquzeli, linqatshelwe ukungena emakamelweni
I-Zacualpan yidolobha elinabantu abangaphezu kuka-4,000 h. Okukhangayo okukhulu ukuthi itholakala emakhilomitheni ambalwa ukusuka emabhishi amahle kakhulu e-Riviera Nayarit. Iyidolobhana labalimi; abantu abalula nabanobungane. Idolobhana lamasiko enkolo eligxile okwenza kukhange ezivakashini.
Amabhishi amahle kakhulu e-Riviera Nayarit, njenge-Las Tortugas, i-Chicala, i-Platanitos ne-Guayabitos, atholakala emizuzwini engu-15-20 ukusuka endlini. I-Sayulita imizuzu engu-45, i-San Pancho imizuzu engu-30 ne-Puerto Vallarta ihora nengxenye.
ubusuku obungu-7 e- Zacualpan
Ngaphandle kokuba ngaphakathi kwedolobhana lase-Zacualpan, i-La colorada ikunikeza ithuba lokwazi amasiko ayo, abantu bayo, isiko layo lihamba amamitha ambalwa. Nakuba zingekho izakhiwo zangaphambi kweSpain esayithini, kukhona iqembu elikhulu lamatshe aqoshiwe noma aqoshiwe engadini yedolobhana, elibonisa amasethi athakazelisayo ekhwalithi enkulu kanye nama-petroglyphs anenjongo, okuhlanganisa ukugoqa namanye amaphethini e-geometric.
Nginomoya wokwamukela izivakashi ngokwemvelo, ngithanda ukuthi izivakashi zami zizizwe zisekhaya. Ngiyakujabulela nokwabelana ngesiko nobuciko bami. Ungacela noma yimiphi imininingwane mayelana nezindawo ezithandwayo eziseduze.